Umphathi wefayile; yintoni na, imisebenzi kunye nezinye iindlela - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 01/06/2022 22:03 | Izicelo
Nganye ye iindlela zokusebenza ezikhoyo namhlanje, zisebenza ngesixokelelwano sefayile esele sichaziwe apho kulawula imixholo eyahlukeneyo yogcino. Enye yezona zinto ziluncedo kakhulu kwi-Android kukuba inokuguquguquka okukhulu xa kujongwa kwiifolda zokugcina. Kufuneka uqhagamshele isixhobo sakho esiphathwayo kwintambo ye-USB kwaye oku kwiPC. Ngale ndlela ninobabini ukulungelelanisa nokudlulisa iifayile ozifunayo.
Kwiposti ukuyo ngoku, siza kujongana nesihloko sokuba yintoni umphathi wefayile kwaye yeyiphi eyona nto ingcono. Siza kugxila ikakhulu kuyo yonke into enento yokwenza nezixhobo ze-Android. Kwinkoliso yezixhobo zethu eziphathwayo okanye iipilisi, umphathi wefayile udla ngokubandakanywa njengomgangatho, into embi yale nto kukuba uninzi lwazo luhlala lusisiseko kwaye luyimfuneko.
Ukuze ufumane ukusebenza kakuhle kwezi nkqubo zolawulo lwefayile, abasebenzisi abanazo apho baya kuba kuvunyelwe ukugcina, ukuhlela, ukucima okanye ukukopa zonke iifayile ezifunwayo, kunye nokukwazi ukufikelela kuzo ngaphandle kwengxaki.
1 Yintoni umphathi wefayile?
2 Unokwenza ntoni umphathi wefayile odibeneyo?
3 Ukungalungi komphathi wefayile osemgangathweni
4 Abaphathi beefayile abagqwesileyo
4.1 Umphathi weFayile yeAstro
4.2 Iifayile zikaGoogle
4.3 Umphathi weFayile App
4.4 Umhloli wamandla ozinzileyo
4.5 Iyonke i-Commander
Yintoni umphathi wefayile?
Abaphathi beefayile kuzo zombini i-Android kunye nezinye iintlobo zezixhobo eziphathwayo ziyafana umsebenzi, cwangcisa iifayile ezahlukeneyo kwaye ikuvumela ukuba ulawule iifayile ngendlela elula kakhulu esinayo kwindawo yethu yokugcina.
Kwiikhompyuter, olu hlobo lomlawuli sele lubandakanyiwe, kodwa oku akwenzeki kwezinye izixhobo eziphathwayo, iitafile, njl. Umphathi wefayile akasoloko esiza ngokungagqibekanga.
Ukuba ngethuba, kwisixhobo sakho kuza a Indlela yefayile ekhutshiweyo, uya kuba nethuba lokuyitshintsha ngokukhawuleza kwaye kungokhuphelo kunye nokufakela usetyenziso lwale njongo.
Unokwenza ntoni umphathi wefayile odibeneyo?
Ukuba nomphathi wefayile efihliweyo kwisixhobo sakho se-Android ngaphakathi kosetyenziso lweesetingi kubonisa ukuba inkampani ifuna ukuthintela aba basebenzisi ukuba badibane nenkqubo yefayile. Esinye sezizathu eziphambili ezikhokelele kulo mlinganiso lukhuseleko, ekubeni utshintsho kulwakhiwo lweefayile ezigciniweyo lunokubangela ukuba imisebenzi ethile iyeke ukusebenza.
Ukuba ufuna ukufikelela kuyo kwisixhobo sakho, kuya kufuneka ufake useto ukhetho, khangela kwaye ukhethe "Imemori kunye ne-USB", emva koko ufikelele "Imemori yangaphakathi" kwaye ekugqibeleni ucofe "Hlola". Xa unayo vula umhloli, uya kuba nakho ukujonga zonke iifolda ezigcinwe ngaphakathi kwimemori yangaphakathi yesixhobo sakho.
Uya kuba nethuba lokutshintsha imboniselo yegridi, ukuhlelwa ngegama, umhla okanye ubungakanani kwaye unokwenza uphendlo xa uqala umsebenzi oxeliweyo kumphathi. Ukuze ufikelele kumxholo weefolda, kufuneka ucofe kuyo nayiphi na kuzo.
Njengoko sele sikhankanyile kwicandelo elidlulileyo, enkosi kwimisebenzi eyahlukeneyo yokuhlela anayo umphathi wefayile, uya kuba nakho ukukhetha iifayile, uzicime, uzikope kuyo nayiphi na indawo okanye wabelane ngazo kwezinye izicelo.
Ukungalungi komphathi wefayile osemgangathweni
Kuluhlu olulandelayo, uya kufumana uthotho lwe amanqaku angalunganga abelana ngabaphathi befayile abaninzi kwaye kuya kuba yimfuneko ukuziphucula ukulungiselela umbutho ongcono kunye noqhelaniso lomsebenzisi.
Abaphathi beefayile eziqhelekileyo ayinawo umsebenzi osikiweyo, ukukwazi ukuhambisa ifayile ukusuka kulawulo olunye ukuya kwenye, umsebenzi onokwenzeka kuphela kukukhuphela. Xa sisenza umsebenzi wokukhuphela, into esiyenzayo kukuphinda-phinda ifayile ethile ngokuba nayo kabini, kube kanye kwifolda yoqobo, ekufuneka siyicime, nenye kwifolda ekhethiweyo.
Inqaku lesibini elibuthathaka esilifumanayo kukuba awukwazi ukuthiya ngokutsha iifolda okanye iifayile, amagama apheleleyo kunye nawoqobo ahlala ebonisiwe, kodwa awavumeli ukuwaguqula ukuze enze umahluko ongcono.
Kwiimeko ezininzi, Akukho zifolda zintsha zinokuyilwa umbutho ongcono yeefayile ezigciniweyo, ungasebenzisa kuphela iincwadi esele zenziwe.
Ekugqibeleni, qaphela ukuba ukuba yayinenkqubo yokugcina iifayile ezilayishwe kwilifu, nokuba kwi-Dropbox, i-Drive okanye abanye, ukulawulwa kwezi fayile kunye nezo zememori yangaphakathi yesixhobo kuya kuba yinkqubela enkulu.
Abaphathi beefayile abagqwesileyo
Ukuze sikwazi ukwenza ngokwezifiso inkqubo yethu yefayile, sincoma ukufumana enye indlela kumphathi oqhelekileyo, njengoko sibonile kwicandelo langaphambili, inokubonisa uluhlu lweengxaki. Kweli candelo, sinika a ukhetho olufutshane lwabanye abaphathi beefayile abacetyiswayo.
Umphathi weFayile yeAstro
Enye yezona zicelo zidumileyo phakathi kwabasebenzisi, nabani na ukukwazi ukulungelelanisa zonke iifayile zombini kwimemori yangaphakathi kunye nekhadi le-SD kunye nelifu. Isimahla, kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye inoluhlu olubanzi lwemisebenzi.
Umphathi wefayile kaGoogle, enojongano olulula kakhulu. Kuya kukuvumela, lawula umxholo ogcinwe kwisixhobo sakho, kodwa awuyi kuyazi indawo echanekileyo yeefayile. Unokukhulula indawo ngokucima iifayile kunye nezicelo, ulawule iifayile kwaye wabelane ngazo nezinye izixhobo.
Umphathi weFayile App
Njengoko igama layo libonisa, esi sicelo Inayo yonke imisebenzi ekhoyo ukuyilawula igcinwe ngeyona ndlela ilungileyo. Isixhobo sasimahla kunye nesinamandla onokuthi ngaso ulawule iifayile zakho ezilayishwe efini.
Umhloli wamandla ozinzileyo
Iklasikhi yokwenyani kwii-mobiles ze-Android, ekuhambeni kwexesha ibiphucula imisebenzi yayo kunye noyilo. Enkosi kule misebenzi sithe sathetha ngayo, unethuba lokwenza iincwadi ezineenkcukacha okanye iifayile ezintsha. Ukongeza kuko konke oku kunye nokukwazi ukulawula, unokufikelela kwiifayile ezigcinwe efini.
Ayipheleli nje ekufumaneni inguqulelo yedesktop yayo, kodwa ikwanesicelo sabasebenzisi be-Android. Kwimixholo yezixhobo zokulawula iifayile, yenye yezona zinto zikhethwayo. Inolawulo lweefayile kwiifestile ezimbini, ukhetho oluninzi, ukhetho lokuqamba ngokutsha, iibhukhimakhi, nokunye okuninzi.
Ngezi zixhobo zolawulo, awuyi kuphucula kuphela ukulungelelaniswa kweefayile zakho, kodwa uya kuba nolawulo olungakumbi malunga nokuba nganye nganye ibekwe phi ukuze ukwazi ukuchonga ngokukhawuleza kwixesha elizayo.
Sihlala sikuxelela oku kulandelayo kwaye namhlanje bekungayi kuba ngaphantsi, ukuba ucinga ukuba uyazi umphathi wefayile ethile oye wazama kwaye ikunike iziphumo ezilungileyo, unganqikazi ukuyishiya kwindawo yezimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubomi beByte » Izicelo » Umphathi wefayile; yintoni na, imisebenzi kunye nezinye iindlela